By- Warraqaa Lammii October 10,2016
Qabxiileen armaan gaditti kaasuuf deemuu Guyyoota dheeraf irraa of- qusachaan ture. Qabxiileen kun Namoota Danta dhuunfaf, Jibbiinsa akkasumas ammo Bilchina siyaasa hin qabneef akka hin liqimfamneef nan beeka.Haa ta’u malee qabxiile kana ammo kan seeran ilaalan akka dhugumma isaa mirkaneessan hin shakku. Waan hundaafu ani Dirqama koo ba’u malee Arrabsoo Namoota Yaada ofii ibsachuu irraa nama dhorkanii,Dhaaba siyaasa tokkotti nama maxxansanii, Lagaan nama waamanii ykn ammo Oromumma nama irraa mulqun nama diinomsan arraba isaanii sodaaf Dhugaa saba dhoksuun ammo Sammuu ofii Madeessuu dha. DHugaan tokko fi Gaaffiin haqaa tokko garuu wal gaafatamuu qaba. Jaarra Hanga Oromoon sirna Bitta Kolonii Jalatti kufe eegalee Qabsoo inni hanga amma ani Barruu kana katabeetti Taasisee fi Taasisaa jiru Hiree fi Egereen Oromoo Maal haa ta’uuf yookiin ammo akkam haa ta’uuf ture? Deebii Gaaffii kana Hayyoota seenaa fi Qabsa’ootaafan dhiisa.
Gama kootiin garuu Fincilli Diddaa Gabrumman eegalee fi Gara Xumuara Gabrummatti ce’uun yeroo amma kana sadarkaa Boonsa irraa ga’e maaliif akka ta’e yookiin ammo Eenyuun akka Hogganamaa ture Deebisuuf Ragaa nan barbaachisuu. Sababni isaa Anu qaaman itti hirmaadhe, Hadhas taatuu Injifannoole Cuccululuqoo Dhandhame waan ta’eef. Qeerroon Sagantaa fi Kaayyoo ABO kan Barruun katabamee ifaaf ifattii jiru sana karaa Nagaan osoo irraa hin sharafamiin fiixaan baasuuf ture. Kaayyoo fi Sagantaa ABO’s ta’ee Qeerroo kanneen beektan ni beektu kannen hin beekne ammo Barbaaddanii dubbisuun Hubachuun mirga keessanii. Kun kanan osoo jiru garuu Tarkaanfii Sukkanneessa fi Hadhaawa Diinni Uummata keenya irratti fudhachaa jiru kana waliin Saganta karaa nagaa fiixan baasuu jedhu sun garuu amman kana waan Abdii qabu miti. Akkuma siyaasni haala yeroo waliin deemtu Sochiin Qeerroo illee akkasuma gara Sadarkaa ittii aanutti Tarkanfachiisuun Barbaachisaa dha. Haala kana keessatti garuu Yeroo Gochootni sirna hin qabne Keessuma Hawaasa Diaspora keessatti calaqqisanii fi ammammo sadarkaa Fokkisaa irra ga’aan argaan jira.
Bilisummaa Oromoo fi Walabumma Oromiyaa arguun fedhii fi kaayyoo Ilma oromoo haqaan socho’uu fi kan Miliyoonotni hanga har’aatti itti wareegamanii. Har’aa garuu Qabsoo Qeerroon Bilisumma Oromoo fi ABO Haawasa Oromoo waliin ta’uun Geggeessa jiru kana keessatti Ga’een Hawaasni Diaspora Taphata jiruu fi Ture Dhibbantan Yoo ilaalame baay’ee xiqqaa dha. Sagalee Uummata Biyya keessa Ukkamamee Baasanii Addunyatti Dhageessisuu irraan kan hafe Bifa Hooggansan wanti raawwatama ture fi Jiru tokkolle hin turre. Dhugaan Jiru Hoggantootni Qeerroo Bilisumma Biyya keessa kan Jiraniifi Qajeelfama, Tooftaa, Karoora fi saganta Jaarmiyaa isaaniin socho’uu dha.
Kan nama Gaddisiisu kan Sabni Oromoo harka Duwwa itti Dhumataa Jiruutti Yeroo Qeerroo, Miseensotni ABO fi Sabboontotni uummata Oromoo Itti du’aa, dhiiga, Qaama Hir’achaa, Mana Barnoota Ariyamaa jiranitti Hawaasni Diasporaa Seera Oromoon Ittiin Bulu isaan asii Maqaa Profesera, Doctor, Activisti, Barattoota seera ofiin jedhan Biyya Hambatti Tumanii Geessanii Oromiyaa Ittiin nuuf Bulchuuf Qophaa’uun isaanii nama suukkannessuu irra darbe… Oromiyaa Dimokiratoofte, kan Mirgi isaa keessatti Kabajame fi nagaan jiraatu arguu fedhaaf Miliyoonotni itti wareegamanitti Aangoof hangam Bololi’aa akka jiran mul’isaa. Tarii aangoo yoo argatan malee deebi’anii hawaasa Sana keessa jiraachuu kan isaan hin dandeessifne Yakka Uummata irratti Raawwatani biyya baqatan qabu laata? Moo Yakka Qabsoo oromoo Gurguruun Kasaraa baroota waggoota 25 keessatti Moora Qabsoo Oromoo cabsuun yeroo garaa garaatti Qabsoo Huqqisan keessa Harka qabu? Hoggantootni Jaarmiyaale Siyaasa fi WBO yeroo biyyii Ollaa isaan hin hafiin Adamfaman Hedduun isaanii Maqaa Research geggessina jedhuunifi Hanga dhiheenya kana Uummatni keenya ajjeefama fi saamama jiruu isaan Diinan harka walitti naqatanii Lafa Oromoon irraatti Saamame Dhaqanii Naannawa Finfinnee Guurratan, Gadii Gugguufanii Caffee Oromiyaa keessatti OPDO waliin Mari’achaa ba’aan sun Yoo abban Qabsoo dhugaa, fi Haqaa Kaayyoo kana Fiixan baasee kan Itti gaafataman isaanitti fakkaate sodaataniiti kan Qabsoo Sabaatti Abba ta’uuf yookiin akka seerrii isaaniif ta’utti tumachuuf kan kora wal waaman.
Anaaf Gaaffii dha.Deebii kanaa Hunduma Uummata Oromoo fi isaanumafan dhiisa. Silaa osoo dhuguma sabaaf yaadu ta’ee Seera isaan tuman Eenyuu Hojiitti haa hiikuufii? Moo kan barate beekan, Hayyuun, Sabboonan Isaan qofa? Warri Biyyaa hoo? Barsiistoni Universitii Biyya keessa, Dockteroonii biyya keessa, Barattootni seera Biyya keessaa, Abbootiin Amantii Biyya keessa isaan hoo akkam gochuufi? Isaan Seera isiin tumtan jalatti buluu malee Ofii shoora Taphataan hin qabanii? Isaan beeka miti? Jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo jiran hundi Seera fi Heera akka qaban ni dagattanii? Moo isaaniin Bakkeetti Dhiiftanii Seera kamiin tumtanii Biyya akkamii Ijaaruufii? Qabsa’ootni Wareegama Gudda kaffalan Kan akka keessan Diaspora Ta’uufis hin milkoofne Biyya isaa keessas Jiraachuu dadhabee Biyyoota Ollaa keessa Baqattumman Joonja’aa jiruu hoo? Yeroon kan isaan dhokse sagaleen isaanii Dhokatee, Kan caasan Siyaasa Moora Baqataa Hin seene, Kan miidiyaan Barbaaddee hin arginee kan Saba fi Dhaaba kamiiyyu haa ta’u Jaallatan irraa addaan citaanoo? “ Because I am Oromo” kan jedhee sagalee Oromoo 2014 Addunyaaf dhageessise sana akkam gochuuf?
Yaada fi Saganta Jaarmiyoole siyaasa Ukkamsuun Ajandaa fi kanneen yaada walii Deggeran waliin qofa Miidiyaa To’achuun ‘Free media’ jechuun nama danqa. Maarree erga Miidiyaan Hawaasa Kan Jaarmiyooleen siyaasa yeroo qilleensa Ga’aa qabaatanii kan irratti wal falmanii yaada isaanii Hawaasa Beeksisan hin taane, Haala yeroo Ilaalchisee kan isaan Ibsa baasan irrattii Hin dubbifamne fi Hin keessumoofne ta’e, Kan Namni Faalla Yaada keessanii qabu fuldura ‘lakkii’ isiinin jedhuu Erga hin taanee Ulaagan Miidiyaa Walabaa kamii? Oromiyaa fi Biyyii Ijaaruu deemnu erga Dimokiraatooftu ta’u qabdii Jenne Har’aa Biyya nama keessa Ta’uun Erga miidiyaan harka Garee dhuunfatti kufti ta’ee kan mootumman Ukkamse waliin garaagarumman isaa Kan Mormiitu fi kan Mootumma ta’u malee Maalii? Har’aa Hawaasni Biyya keessa irra caalan maaliif Akka Jaarmiyaaleen siyaasa oromoo walitti Dhufu dadhaban ykn waliitti dhufuuf laaffatan kan hin beeknetu caala. Silaa osoo beeke kam akka deggeruu fi kam duuka akka bu’uu salphaatti hubata ture.
Kun garuu Hawasnii Diaspora gareen Dantaa dhuunfaafi Aangoof Bololi’uu qaawwa Godhachuun akka waan isaan waliif galuu dadhaban fakkeessuun isaan kan rafaa jiran gochaa Ofii nama hojiin of muuduf kaka’uun Yoo OPDO lammata Ijaaruuf hin ta’iin Dimokiraasii Odeeffama jiru kana kan fashaleessu fakkaata. Sababni isaa Qeequ malee Qeeqamuu waan hin feenef. Qabxiin koo inni dhumaa amman achii Xalayaa Hoggantoota keenya irraa Mana hidhaa dhoksaan nu dhaqqabdeen daldaluun ykn Hawaasa keenya Gowwomsuun Hafu qaba. Kana kanan jedhe lafaa ka’e miti. Guyyoota Manni Hidhaa qilinxoo Abiddaa fi Rasaasni itti Roobde Lubbuun Gootota keenya Dhume Hidhamtootni siyaasa Oromoo achii Buuten isaanii dhabame wallaalamun Toora Miidiyaa Haawasarra osoo naanna’aa jiru ‘ xalayaan mana Hidhaa Hoggantootan barreeffamte’ jettu Gidduun Marsuu Eegalte. Guyyaa Muraasa booda ammo Hanga amma bakkuma isaan jiran akkan hin baramiin ammo Deebifne Dubbifne. Ajaa’iba. Maal yaadni wal dha’u. Kana Qofaa Miti,.. Caasa Qeerroo kan Hoogganan Of fakkeessa fi dubbachaa,… Sa’aatii Sadan kan keessatti Bakka Hoggantootni keenya mana hidhaa Jiran Yoo mootumman himu dide Tarkaanfilee armaan gadiitu fudhatama 1)…..2)….3)… haa ta’uuti sa’aa 3 miti Guyyaa 3 keessattu hooma hin argine. Kun caasan Qeerro eessa akka qajeelfama Fudhatuufi Murtii Nama tokkon akka hin sochoone Ifaaf Ifatti Mul’isee Darbeera.
Haa ta’u malee Namnu Kan garaa Garaa Haa ta’uu jedhee callise. Sababni isaa Diinni Hundi keenya itti Duula jirru Mootumma TPLF Qofa waan ta’eef. Labsii Hatattama mootumman wayyanee Duguugga kanaan duraa caala ammammo seerawa gochuuf waamte kana sagalee, Kayyoo fi Humna tokkon dura dhaabbachuun Injifannoo fi Bilisumma feenuu argachuuf Kana booda Garuu Mootumma wayyaneenis Lolaa, Tokkumma Keenyas Cimsaa, Uummata keenyas Karaa Dandeenyuun Bira Dhaabbacha deemuuf akka nuuf qajeelutti Qabsoo Uummataa Uummataaf, Qabsoo Jaarmiyoole Siyaasa ammo Jaarmiyaale siyaasaf dhiisuun Hojii Hawaasa Dadammaqsu, Diplomaasii fi Diinagdeen Bira dhaabbachuutu Diaspora irraa eegama.
Xumura irratti yeroo Awwalcha sirna Gabromfata Mootumma wayyaane irratti sirbuuf sa’aa 11 irra jiru kanatti Yeeyyii Hoolota keessaa fi Warra Maqaa Uummatan Bitee Maqaa Ofiin Daldaluu kana ilaallacha Sirbuun Sabichaa fi Kayyoo Tiksuuf malee Jibbaaf akka hin taane Hubachuun barbaachisaa dha. Namni yaada ofii mirga Walabaan ibsachuu Oromiyaa Dimokiraatofte keessatti waan qabaatuf Mirga koo ammuma Kaasuun akka anaaf kabajjan Gaafadha. Yaadni armaan oliitti katabe kun kan Dhuunfa kootii malee kan Qamaa Lammaffa kami akka hin taane akka anaaf Hubattan. Injifannoon Uummata Oromoof